Barnaamijka Hagaajinta Tayada - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Community Health Plan ee Washington (CHPW) Barnaamijka Horumarinta Tayada ee Faa'iidada Medicare ayaa cabiray sida ugu wanaagsan ee aan wax u qabanay si aan kuu siino daryeel iyo adeeg tayo sare leh oo macquul ah.
Waxaan hubinaa barnaamijyadeena iyo adeegyadeena la kulmo ama ka badato heerarka ka socota Guddiga Qaranka ee Hubinta Tayada (NCQA) ee Aqoonsiga Qorshaha Caafimaadka. Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan ku saabsan 2021 Barnaamijka Hormarinta Tayada halkan.
Faahfaahin naga sii adoo ka soo wacaya Adeegga Macaamiisha halkan 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 711) ama dhammaystirka sahannada si aad ula wadaagto khibradahaaga.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Febraayo 19, 2021